Mogadishu Journal » Sarkaal ka tirsan Puntland oo lagu weeraray Boosaaso
Mjournal :-Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in dabley hubeysan ay weerareen sarkaal ka tirsan Qeybta Canshuuraha Berriga ee Gobolka Bari, iyadoo is rasaaseyn kooban ay dhex martay Ilaalada Sarkaalka iyo dableydii weerartay.
Is rasaaseynta dhex martay Ilaalada Sarkaalka iyo dableyda hubeysan ayaa waxaa ku geeriyooday qof ka soo jeeda qowmiyada Oromada oo ka ag dhowaa goobta is rasaaseynta ka dhacday.
Wararka ayaa sheegaya in kooxdii hubeysneyd ee weerarka geysatay ay ka baxsadeen goobta.
Ciidamada Booliska Puntland ayaa howlgallo ka sameeyay halka is rasaaseynta ka dhacday, iyadoo la sheegay in dad lagu soo qabtay.
Maalmo ka hor ayay aheyd markii rag hubeysan ay rasaas ku fureen gaari ay wateen askar ka tirsan Ciidamada Puntland.